China ihighlighter makeup umthengisi we-cosmetic akukho logo igqamisa i-makeup ecwebezelayo yobuso obuqaqambisa imveliso yomgubo kunye nababoneleli | Iris Ubuhle
Imilebe yolwelo oluyiMatte
Ukufika okutsha kwe-cosmetic matte liquid lipstick iseti cosme...
Ileyibhile yabucala yomlomo weMatte yenza intonga yomilebe yokuthengisa...
I-Lip liner ileyibhile yabucala inkohlakalo yasimahla yelogo yesiko ...
I-lipstick yolwelo kunye ne-lip liner iseti ivenkile yesiko ...
ivenkile yomlomo intonga yesiko uphawu vegan velvet umlebe sti...
Umlebe weglosi onqunu ileyibhile yabucala yesiko unqunu umenyezelo wemilebe...
Umthengisi we-Lipgloss imilebe yesiko leglosi yabucala ileyibhile ye-diy c...
OEM ubuso isiseko makeup ulwelo wholesale isiko p...
Ihoyile ye-eyeshadow ye-palette ye-vegan ephezulu ye-pigment yangasese...
i-highlighter makeup makeup umthengisi wokuthambisa akukho logo igqamisa isithambiso esimenyezelayo sobuso obuqaqambisa umgubo
Isikhanyisi sesinyithi esinemibala ephezulu, dala ukukhanya okufihlakeleyo okanye ukukhanya okugcweleyo ngalo mgubo wesilika, owomeleza ulusu.
I-OEM .ODM : Iyafumaneka
EXW ixabiso : 1.55 ~ 2.99 USD/PCS
Yongeza ukukhanya kunye nokuqaqamba kwindlela yakho yokwenza ngengqokelela yezezimonyo zentsimbi.
Izikhanyisi zethu zesinyithi zokuqaqambisa amanqaku aphezulu kwaye zongeze ubukhulu ebusweni bakho ukuze bubengezele.
Uya kuthandana nolu buso luncinci lubonisa umgubo onika iimpawu zakho ukukhanya okukhulu okujongeka ngokwakho!
Igama lento I-makeup ye-Highlighter
Inzuzo Yethu 1. Inkohlakalo-engenalo / Akukho uvavanyo lwezilwanyana
2.Vegan / Paraben free
3.Imibala eqaqambileyo yeperile
4. I-Silky, ilula
5. Ihlala ixesha elide
OEM / ODM Yamkelekile
Ukupakishwa ibhokisi yombala woyilo
Ukuhambisa ngenqanawe Ngomoya/ ngolwandle/ Express
Intlawulo TT / Paypal / West union njl.
1.Q: Ngaba ungumenzi okanye inkampani yokurhweba?
A: singabenzi be-makeup yobuchwephesha.
2.Q: Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
A: Okokuqala, sazise imfuneko yakho malunga nezinto, emva koko siya kunika ingcebiso ngokufanelekileyo kwaye sinikeze ikowuteshini. Nje ukuba zonke iinkcukacha ziqinisekisiwe zingathumela iisampuli. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa ukuba iodolo yenziwe.
3.Q:Ngaba uyayamkela i-OEM ODM kwaye Ngaba ungasenzela uyilo?
A: Ewe, senza i-OEM ODM kwaye sibonelela ngeenkonzo zoyilo.
4.Q:Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
A: Emva kokuba uhlawule intlawulo yesampuli kwaye usithumelele iifayile eziqinisekisiweyo, iisampuli ziya kuba zilungele ukuhanjiswa kwiintsuku ze-3-7. Iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe nge-express kwaye zifike ngeentsuku ezi-3-7. Ungasebenzisa i-akhawunti yakho ye-express okanye usihlawule kwangaphambili ukuba awunayo i-akhawunti.
5.Q:Kuthekani malunga nexesha eliphambili lokuvelisa ubuninzi?
A: Ukunyaniseka, kuxhomekeke kubungakanani bomyalelo kunye nexesha obeka ngalo iodolo. Ngokuqhelekileyo inokuba yi-25 - 35 iintsuku. Siyifektri kwaye sinomthamo oqinileyo wemveliso, sicebisa ukuba uqale ukubuza kwiinyanga ezimbini ngaphambi komhla ongathanda ukufumana iimveliso kwilizwe lakho.
6.Q:Ithini imiqathango yakho yentlawulo?
A: Siyayamkela iT/T, iPaypal, iWest Union.
7.Umbuzo: Indlela yokuqhagamshelana nathi?
A:Singathanda ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye impendulo onayo!
Silapha ukuze sikuncede—nceda uzive ukhululekile ukusithumelela i-imeyile irisbecosmetics@gmail.com.
Ngaphambili: vegan eco makeup remover oyile hydrating ileyibhile yabucala yokucoca ioyile yokucoca make up remover
Okulandelayo: Vegan highlighter ileyibhile yabucala makeup isithambiso isihombiso makeup yabucala ye-oem egqamisa ipalethi
i-cosmetic highlighter makeup
umthengisi makeup highlighter
i-highlighter makeup ihoseyile
I-Highlighter Palette Makeup
i-makeup highlighter powder
Akukho ILogo Highlighter Makeup
vegan highlighter ileyibhile yabucala makeup isiko h...
Umgubo weSiseko soThengiso oluNgqo kwiFactory Lungiselela...
OEM ubuso isiseko makeup ulwelo wholesale cus...
Ihowuliseleli isiseko sokuhombisa isiko le vegan isiseko...
vegan eco makeup remover oil hydrating yabucala ...
Isiseko sesiko eleyibhile yabucala matte isiseko...
Ukuba ufuna ukwazi iinkcukacha ezithe vetshe, pls sithumele imibuzo ngoku.
Igumbi 723 1 iteknoloji drive Bldg J , Irvine CA92618, US.